Salamo 33:12 "sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany."
Ry havana malala ao amin'ny Tompo, izany indray ny sitrapon'Andriamanitra tonga amiko sy aminao, "sambatra" inona moa no atao hoe sambatra, raha ny amin'ny maha olombelona ny hoe sambatra; dia manana filaminan-tsaina, fiadanana, tsy misy manelingelina, miaina finaritra. Nefa mahasabatra kokoa ny manana an'Andriamanitra. Ny salamo mantsy ry havana dia tononkira, hira fiderana an'Andriamanitra; fanomezana voninahitra Azy.
Moa ve teo amin'ny fiainanao ary nahitanao fiadanana, filaminana, fahasambarana?
Sambatra tokoa ny manana an'i Jehovah ho Andriamaniny, sy matahotra azy. Ny olona mantsy rehefa manana an'Andriamanitra dia tsy mandeha araka ny filan'ny nofony intsony, fa mandeha araka ny fanoroan'ny Fanahy Masina. Izany hoe mihaino ny feon'ny fiheritreretany, raha manana izany ny olona ry havana eny fa na dia hianao io aza; dia hohitanao izany fiainana manana fiadanana. Jereo amin'ny saina tsy miangatra fotsiny ary ny hoe: "olona manao ny marina sy ny mpandainga na ny mpisoloky, na ireo izay manao zavatra hafa ankoatr'izany". Manahoana ny fiainan'izy ireny?, moa va tsy manana fetra sy farany ireny rehetra ireny? dia ny fiainana ao anatin'ny tebiteby lava; satria matahotra ny ho tratra sy hofantatra ny zava-dratsy natao. Moa va tsy fahafatesana, na gadra no miandry azy? Ny olona maty eritreritre no manao ireny rehetra ireny, tsy mihevitra izay hiafarany, fa ny olona manana ny Tompo kosa dia tsy tahaka izany, fa mahay mihaino ny feon'ilay marina dia ny Fanahy Masina; hitantsika izany ao amin'ny Salamo ihany no hamaliana izany fanotaniana izany, Salamo 1:1 Fa sambatra kosa ny manompo an'i Jehovah ilay Andriamanitra mahery sy Tompo ny Tompo, Mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra mahery, izany no Tompoina sy ampanjakana ao anatintsika ka hananao ny fiainana tsara sy mendrika tokoa. Ny Tompo dia tsy mamela antsika ho irery na inona na inona ataontsika; tia antsika mandrakariva Izy, mijery antsika mandrakariva ny masony, ary tsy mitsahatra ny mikatsaka izay mahasoa ahy sy anao. Koa raka tianao ary ny hanana fiainam-pahasambarana sy fiadanana, raiso ka vakio ny tenin'Andriamanitra, teny tsy manampahataperana, teny fiainana. ao no ahitanao ny fiadanana.
Ity misy karazana tari-dalana kely hoantsika, isika izao mantsy dia toy ny hazo iray. Raha mijery ny hazo isika, rehefa ambolena mantsy ny voa iray dia mitsiry, rehefa mitsiry iny voa iny dia lasa misy raviny kely sy ny tahony. Nefa raha tsy teo ny rano izay nanamando iny voa iny sy ny zazika na ireo sokajy maro samihafa, dia tsy hitsimoka mihitsy ny voa. Dia tahaka izany koa isika olombelona, ny tenin'Andriamanitra ilay rano anondrahana azy, io no mamelona sy manamando ny fiainan'ny Kristianina, ary ny zezika izay mahalonaka ny tany dia ny fandehananao mamonjy ny trano fiangonana isanandro raha azo atao, na isaky ny Alahady. Ka izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe "sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny", satria rehefa manana azy ny olona tsirairay avy, ilay mahalonaka ny tany dia ny tenin'Andriamanitra, ny fampanjakana izany, ao amin'ny tsirairay avy. Koa aoka ary isika ho toa izany koa. Rehefa mitombo ny hazo dia mahazo faka tsara, efa nifankazatra tsara tamin'ny tany onenany, na ny aniriany izany. Io dia ny fiangonanao io tany io, io no manolokolo anao, mamolavola anao, manome anao ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mahavelona, ka mahavokatra anao ihany koa. rehefa tsara tondraka sy tsara karakara mantsy ry havana ny hazo na ny voly dia mahita vokatra tsara tokoa. koa meteza ary ho voa tsara mety haniry, handray ny tsiro izay omen'ny Tompo anao. Dia ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ho raisina fotsiny fa atao fiainana ka ho lasa hazo tena tsara sady mahafa-po ny tompony dia ilay Andriamnitra Ray mpahary. Araka ny tenin'i Jesosy hoe: "Izaho no voaloboka, hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona." izay hita ao amin'ny Jaona 15:5. Koa aoka ary isika ho iray amin'i Kristy mandrakariva ka hitoky aminy dia hotanteraka amintsika izany teniny izany. Satria ny maha firenena ny firenena iray anie dia ny olona tsirairay avy ny ankohonana aloha no voalohany indrindra. Ary rehefa ny ankohonana no lasa hazo tsara, araka ny ohabolana Malagasy hoe: "Ny hazo no vanon-kolakana ny tany naniriany no tsara". Dia toy izany koa isika Kristianina, manana an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, rehefa sambatra sy miadana ny ankohonana ry havana dia hita taratra ihany koa izany eo amin'ny firenena, ary izany no hiriantsika tsirairay avy, koa aoka ary isika ho tany lonaka hanirian'ny voa ka ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy izay Tompointsika, ka hanana ny fiainana Mandrakizay, ary hiadam-pinaritra eto amin'ity Nosintsika ity ka hiseho ny voninahitr'Andrmanitra.
Koa aoka ary isika hahay hihaino ny feon'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fiainantsika, indrindra fa ny fanompoan-tsampy dia tsy sitrak'Andriamanitra izany; mampalahelo azy, ka mila miala amin'izany ny olona eny tsy eto madagasikara irery ihany fa manerana izao tontolo izao, ny sampin'ny olona mantsy dia ny filan-dratsy, ny fisotroan-toaka, ny fifohana sigara sy ny zava-mahadomelina, ny fijangajangana, ny fanompoana andriamanitra hafa ankoatra ilay mpahary, ireny dia tsy mahasoa avokoa. Tsy ahitanao ny fahamarinana, fiadanana, fahasambarana; fa i satana kosa dia faly amin'izany satria raha manatanteraka ny sitrapony ianao dia izay no ilainy, ary mampiasa ny miaramilany mandrakariva izy; ka mila miorina tsara amin'ny Tompo ianao, mahereza mandrakariva amin'ny fanompoana azy ka ho mendrika ny Tomponao ianao.
Koa mahereza ry havana ary mazotoa manompo ny Tompontsika. Ny voninahitra dia hoan'Andriamanitra irery ihany.